Warmly Welcome: ဟိုမရောက် ဒီမရောက် နေ့များ
ဂိမ်းကစားရင် ၀က်ရူးပြန်တတ်တယ်တဲ့ .....။ အင်တာနက်ကို အချိန်အကြာကြီး သုံးရင် နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ နဲ့ ဘာဆိုလား ... ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။
Me 2.. ကျွန်တော်ဆို..Game အသစ်ဝယ်လာတဲ့နေ့ဆိုရင်.. ညတောင်မအိပ်ဘူး.. အဲ့ဒီလိုနဲ့ ၃ ၄ ညဆက်လာတော့ .. မျက်တွင်းလေးဟောက်ပက်နဲ့ပေါ့... Direct X9support လုပ်တဲ့ Game တွေအားလုံးနီးနီးဆော့တာ.. ကုန်ရော... နောက်ပိုင်း Game တွေတော်တော်များများက Direct X 10 က်ုပဲ support လုပ်ကြပြီး အဲ့ဒီ့ Graphic Card တင်ပဲ အနဲဆုံး၂သိန်း၃သိန်း လောက်ရှိတော့ Game မဆော့ဖြစ်တာတောင် ကြာပြီ... ဟီးဟီး Upgrade မလုပ်နှိုင်သေးလို့....
နောက်ပိုင်းလာတဲ့ DVD version ဂိမ်းတွေ သိပ်လန်းတယ်။ နက်မကောင်းရင် ဂိမ်းကိုပဲ တီးနေတာ .. တီးလုံးလေးတွေကလည်း ခိုက်စေတာ အမှန်ပါပဲ။ ၀က်ရူးပြန်တတ်တယ် ဆိုတာက သိပ်ပြီး အာရုံစိုက်ကစားရတဲ့ ဂိမ်းတွေ ဖြစ်မှာပါ။ မချစ်နှင်းရေ ၀က်ရူးပြန်မှာ ကြောက်ရင် ဖဲလေးတော့ကစားသွားအုန်း။
အကိုရေ ဂိမ်းဆော့တာက အရမ်းကိုဆိုးလွန်းပါတယ်နော်။ ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာဆိုရင် ခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်အကို အသက် ၁၇၊ ၁၈ အရွယ်ပေါ့နော် စိတ်ကြွနေတဲ့အရွယ်လေးတွေ ဂိမ်းတွေဆော့ပြီးရင် ဂိမ်းထဲကလို စမ်းချင်လာတယ်အဲ့တော့ အပြင်မှာတကယ်စမ်းလာတယ် မကြာမကြာကို ဖြစ်ပါတယ်။ သေနတ်ကလည်း လွယ်လင့်တကူဝယ်လို့ရနေတော့လေ။ သတင်းထဲမှာလာလိုက် ဂိမ်းကစားပြီးတော့ လက်တည့်စမ်းချင်လို့ဆိုပြီးတော့ သေနေတာတွေမနည်းဘူးပဲ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလေးကိုလည်း အကျိုးမဲ့အဲ့လိုလေးတွေ မဖြစ်စေချင်ဘူး။
ကိုဝင်းဇော်ရေ..ဟုတ်ပါ့..အခုခေတ် ကလေးတွေ ကွန်ပျူတာကိုင်ဆိုရင် တခြားဟာ မလုပ်ချင်တော့ဘူး...ဂိမ်းပဲ တန်းဆော့တော့တာ..။
သူတို့ခေတ်နဲ့ သူတို့ဆိုတော့ တားလို့မရပေမယ့် အထိန်းအကွပ်တော့ လိုမယ်ထင်တယ်..။ အိမ်က သားကြီးကတော့ ဂိမ်းရဲ့ ဒဏ်နဲ့ စကားထစ်သွားရတယ်..။ စိတ်လှုပ်ရှားတာကို မခံနိုင်တာထင်ပါရဲ့။ ငယ်ငယ်က ကိုယ်တွေလည်း ကလေးလေး ကွန်ပျူတာ ကောင်းကောင်း ကိုင်တတ်အောင်ဆိုပြီး လွှတ်ထားမိလိုက်တာ...။ လူကြီးတွေ အပြစ်ပါပဲလေ..။
တစ်ရက်ကို ၂ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ဖြစ်တယ်။
အသစ်ရှိရင် ပို့ပေးအုန်း ... အဟတ်
ငါးချဉ်လေး အမှတ်ရ၀ယ်ခဲ့ပါ ..
လွန်ကျူးတာ ဘာမှ မကောင်းပါဘူး။
အရင်ကတော့ ကျွန်တော်လဲ အလွန်ဆော့ပေါ့ ကွန်ပြူတာဂိမ်း ပီအက်စ်၂၊၃ အိပ်စ်ဘောက်စ် အကုန်တစ်ခုမကျန်စေရ လှည့်ဆော့တာ အခုတော့ အလုပ်နဲ့ ဘလော့ဂ်နဲ့ ဖိုရမ် နဲ့မို့လို့ ဖြတ်ထားတယ် ဟိ ဟိ..။
ပြန်လာရင် ပဲခူးအတွေ့ကြုံတွေတင်ပေါ့း) ဓာတ်ပုံတွေလည်းကြည့်ချင်တယ် ပဲခူးက ဘူးသီးကြော်စားချင်တယ်ဗျ ။
အခု ကျနော် ဂိမ်းတွေ မကစားဖြစ်တော့ဘူးဗျ...
ဂိမ်းဆိုလို့ ဟမ်းဖုံးထဲက ဂိမ်းလောက်ပဲ ဆော့တတ်တယ်။
ငါက ဂျင်ပဲ သောက်တာ
ပြန်လာရင် ဖက်တန်းသူ တစ်ယောက် အပါခေါ်ခဲ့ကွာ ပွတ်ချွန်းလိပ်ခိုင်းမလို့
တီးတော့တာပဲ၊ ဒါပေမယ့် မျက်လုံးကိုက်တယ်ဟ.
ကျွန်တော်က ဂိမ်းတော့ မဆော့တတ်ဘူးဗျ.. တစ်ခွက်တစ်ဖလားတော့ ကြိုက်တယ်.. ပဲခူးရောက်နေတယ်ပေါ့လေ... အဆင်ပြေပါစေဗျာ.။
စာတွေ တကူးတက တင်နိုင်လို့
ကျွန်တော်လဲ ဂိမ်းဂျိုးလေ၊ ခုမှသာ အင်တာနက်သုံးလို့ ဘလော့လေး မတတ်တခေါက် ရေးနေလို့ မဆော့ဖြစ်တော့တာ ဟဲဟဲ။
ပျော်ရွှင်တဲ့ ခရီးလေး ဖြစ်ပါစေ။
ဆော့ကြည့်ချင်လို့ ၀တ်ရူးပြန်သွားပါစေ ( ဟဟ )
ပြန်လာရင် ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်လာမလဲ ပို့စ်ကနေ အော်ဦးနော် ( အဟက် အဟက်)
ဂိမ်းဆော့တာ ကြိုက်တယ်... အစ်ကိုပြောတဲ့အတိုင်း အလွန်အကျွံတော့ ကောင်းဘူး...